4Fish Waterfront Pool House - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJay
Indawo : Idolophu endala, i-East Side of Koh I-Lanta. IKrabi Province
4Fish Waterfront Pool House yindlu enamabali ayi-2 eyakhiwe phezu kolwandle enepuli ebonakala ingenasiphelo, indawo yokuhlala ephandle, indawo yokuhlala evulekileyo ngaphakathi nekhitshi lale mihla elinento yonke. Indlu inamagumbi okulala ayi-3, igumbi lokulala elikhulu linendawo yokubuka ulwandle entle, igumbi lokuhlambela lalamaxesha kunye nekhabhathi. Igumbi lesibini linendawo yokubuka ulwandle ibe linegumbi lokuhlambela elisetyenziswa nangabanye abantu kunye negumbi lesithathu elinendawo yokubuka amahlathi.
Indlu eyi-4Fish Waterfront Pool yindlu enamabali ayi-2. Umphantsi unendlu yangasese enye yale mihla, igumbi lombane elinomatshini wokuhlamba impahla. Indawo yelayibrari yesofa etofotofo, isicwangciso somgangatho ovulekileyo ikhitshi lale mihla, indawo yokuhlala yangaphakathi enethelevishini eflethi eyi-40 ", i-TV yesatellite kunye nendawo yokuhlala yangaphandle enepuli ebonakala ingenasiphelo.
Umgangatho wesibini unamagumbi okulala ayi-3 ahlukeneyo, igumbi lokulala elikhulu linendawo yokubuka ulwandle kunye netyeya yawo yabucala, ibhedi enkulu etofotofo eyenziwe nge-6.6 "*6.6" kunye neentlobo eziyi-3 ezikhethekileyo zemiqamelo, igumbi lokuhlambela lalamaxesha kunye neshawa yemvula ethe nca ukuze ungene kwiwodrophu. Iyonke indawo yegumbi lokulala elikhulu 50sq.m, Walk-in closet 10 sq.m, kunye
ne-balcony 10 sq.m Igumbi lesibini linendawo yokubuka ulwandle kunye negumbi lokuhlambela lalamaxesha kunye negumbi lesithathu. Izinto zokondlula ibhedi apha zikwanazo nebhedi enkulu kakhulu i-6.6 "*6.6" enedesika esebenzayo kunye nendawo yokunxiba kwigumbi lokulala. Indawo epheleleyo yegumbi lesibini lokulala 25 sq.m kunye negumbi lokuhlambela 5 sq.m.
Igumbi lesithathu lineebhedi ezilala umntu omnye eziyi-2. Eli gumbi lokulala linendawo yokubuka ulwandle ibe linefestile ekhanyayo onokujonga kuyo iinkwenkwezi,ubone ubuhle benyanga kunye namahlathi. Iyonke indawo yeli gumbi lokulala 25 sq.m
4.89 · Izimvo eziyi-260
Siyakuvuyela ukudibana nawe xa ufika size sikunike inkcazelo engakumbi ngendlu yethu size sikubonise indawo yokuhlala, sikunike iinkcukacha ezingakumbi ngesiqithi, indawo yokuhlala yasekuhlaleni kunye nohambo oluya kwisiqithi esikufutshane. Kwaye ngexesha lokuhlala kwakho nathi ukuba uneengxaki eziphazamisayo siza kukuvuyela ukukunceda njengesiqhelo.
Siyakuvuyela ukudibana nawe xa ufika size sikunike inkcazelo engakumbi ngendlu yethu size sikubonise indawo yokuhlala, sikunike iinkcukacha ezingakumbi ngesiqithi, indawo yokuhlala…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Koh Lanta